EUPHORBIA "TIRUKALLI": KORRIIN IYO DARYEELKA GURIGA, TARANTA, SAWIR - DHIRTA GUDAHA
Euphorbia "Tirukalli": sifooyinka, daryeelka guriga
Dabeecadda, Euphorbia "Tirukalli" waxay kori kartaa illaa 9 mitir, laakiin sida xayawaanka, koritaankiisu wuxuu yareeyaa awoodiisa iyo manjooyinkiisa. Waddankayaga, beeralayaal hiwaayad ah ayaa bilaabay in ay ugu yeeraan warshadan asalka ah "qaawan qoyan" ama "qalin qalin". Waxaynu baraneynaa waxa Euphorbia u taagan yahay, Tirukalli, sida loo koro oo loo dhiso, iyo dhibaatooyinka la heli karo.
Astaamaha Botanical ee geedka
Euphorbia "Tirukalli" waxaa loola jeedaa caanaha iyo qoyska isla magaca. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa euphorbia ama unugyada curyaamiya ee kumbuyuutarka. Waa warshad geedka dilka ah oo sii kordhaysa ilaa 5-9 m: Succulent waa mid aad u khafiif ah, kaliya 5-7 mm oo qaro weyn leh, laamood. Waxay leeyihiin qaab cylindrical iyo midab cagaaran casiir leh. Dhamaantoodba waxay koraan yar yar, caleemo aan qallafsaneyn ilaa 12 mm dheer iyo qiyaastii 1mm ballaaran. Marka caleemaha kuwanu dhacaan, waxay ka tagaan calaamadaha dhibcaha laanaha.
Geedka ubaxyada leh ubax yar oo jaale ah, laakiin xaaladaha qolka waxaa dhacaya marar dhif ah. Ka dib markii la abuuray duufaan saddex-daboolan oo siman. Waxay tilmaamaysaa dhirta diyoobiga.
Ma taqaanaa? Maalmihii hore, euphorbia "Tirukalli" ayaa loo adeegsaday warshadaha loogu talagalay xargaha. Hadda waxaa laga soo saaraa sunta kalluunka.
Waxaa si weyn loogu qaybiyey qaaradda Afrika iyo jasiiradaha kuyaala, Madagascar, waxaa laga helaa Jasiiradda Carabta, waxaana uu xidid ka gooyey qaybaha kale ee adduunka.
Siyaabaha loo koro iyo daryeelka guriga
Marka ay sii kordheyso caanaha "Tirukalli" waa in maskaxda lagu hayaa in ay si degdeg ah u koraan oo u baahan tahay meelo badan. Caadi ahaan guriga wuxuu gaari karaa mitir. Si kastaba ha noqotee, haddii geedka aan la gooyin oo ku koraan awood weyn, waxay gaari kartaa cabbir ka weyn. Xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo ayaa ku koraya 6 m. Guud ahaan, waa sahlan tahay in la koro oo iska leh dhirta indoorka ee aan qabyo ahayn oo si fiican ugu koraan xafiisyada.
Tani waa warshad kuleyl ah oo ka timaada Afrika, qorraxduna jecel yihiin. Waxa uu ku habboon yahay daaqadaha koonfurta. Halka, inta lagu jiro qoraxda kulul, waxaa lagu talinayaa in pritenyat. Haddii aan la sameynin, euphoriya waxay weli dareemaysaa caadi ahaan, laakiin waxay heli doontaa midab hurdi ah. On daaqadaha ee jihada bari ama galbeedka, euphorbia hayn doonaa tones cagaaran dhalaalaya oo dareemaya raaxo. Waxay caadi ahaan qaadataa penumbra, laakiin shoog qaro weyn ayaa keena warshad si ay u faafiso wax badan oo lumiso muuqaal qurxoon.
Xilliga kuleylka, waa la ogol yahay in la qaato saldhigyada wanaagsan, laydhka iyo balakoonka. Isla mar ahaantaana, waxaa looga baahan yahay in laga saaro roobabkii ku dhuftey, taas oo ah hoos u dhac heerkul ah iyo heerarka.
Waa muhiim! Casiirka caanaha ee euphorbia waa mid aad u sun ah, sidaas darteed waa in lagu hayaa meel carruur iyo xoolaba ah. Haddii uu maqaarka ku dhaco, wuxuu keenaa gubasho daran, oo haddii uu indhahaaga galo, waa lagaa tagi karaa adiga oo aan aragti ahayn, wax walbana markiiba ma muuqdaan, laakiin dhowr saacadood.
Heerkulka ugu fiicnaanta xilliga koritaanka (dayrta-dayrta) waxay noqon doontaa markii ay tahay +25 ° C inta lagu jiro maalinta iyo + 20 ° C habeenkii. Xilliga jiilaalka, marka dabeecadda suuban ee dabiiciga ah uu yahay xilli aan caadi ahayn, heerkulku wax yar ayuu hoos u dhacayaa, laakiin marnaba ka hooseeya + 12 ° C, haddii kale dhirku wuu dhiman karaa. Waxay u fiicantahay haddii heerkulka jiilku uu noqon doono + 15 ... + 18 ° C. Tilmaameeyaha isla heerkulka waa in la dhigaa haddii dhirta loo qaado hawo cusub.
Warshad hawo qalalan ayaa u dulqaadaneysa caadi ahaan mana u baahna buufinta. Wixii tijaabo ah oo gaadhay heer aad u wanaagsan xilliga kuleylka, waxaa lagu talinayaa in la qubaysto qubays si looga saaro boodh. Markaas warshadu waa inay ahaato meel kulul, oo si fiican u iftiimaya iyada oo aan la qorin ka hor qallajinta. Nuqulada da'da yar waxaa lagu nadiifin karaa burush jilicsan.
Sida dhamaan succulents, nooca caanaha ah wuxuu awoodaa in uu isku ururiyo biyaha isla markaana u diyaargaroobo abaarta. Sababtaas awgeed, waxay jiri kartaa wakhti yar oo ciid ah oo qallalan. Way ka fiicantahay in la illoobo in ay biyo ka badan tahay si aad u dhaafto. Qoyaanka xad-dhaafka ah ee loogu talagalay isaga waa waxyeello, sababtoo ah waxay keeneysaa in ay ka soo baxaan xididada. Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, waraabinta dhexdhexaadka ah ayaa lagu sameeyaa asal ahaan, mar walbana biyo ka daadi digsiga. Xilliga diiran, waxaa la sameeyaa wax ka badan hal jeer toddobaadkii. Xilliga qaboobaha, waxaa la yareeyaa 1 mar bishii waxayna si fiican u waraabin jireen.
Waraabinta waxaa looga baahan yahay in ay fuliyaan biyo jilicsan, oo si fiican u degan.
Feed ee xilliga firfircoon ee horumarinta guga ku saabsan 1-2 jeer. Bacriminta loogu talagalay cacti ama succulents oo ku jira inta badan potassium ayaa ku habboon tan. Wixii quudinta waxaad isticmaali kartaa xal ash - succulents way jecel yihiin, maxaa yeelay waxa ku jira potassium iyo fosfooraska. Geed weyn oo waaweyn, waxaad isticmaali kartaa qolofka ukunta. Tani, waxaa la jajabiyey oo loo daboolay ciidda, laakiin ha noqon mid aad u qiiro - waxay ka dhigeysaa carrada yar.
Waa muhiim! Bacriminta xad dhaafka ah, gaar ahaan nitrogen, waxay si xun u saamayn kartaa caanaha waxayna keenaysaa dhimashadooda.
Marka ugu horeysa, isugeyn cusub ayaa la iibiyaa - toban maalmood gudahood ka dib iibsashada.
Nidaamka laftiisa wuxuu ku dhacaa qaabka soo socda:
Diyaarso dheriga beeraha. Waa inuu heystaa god daadi ah.
Qeybta hoose waxaa lagama maarmaan ah in la saaro lakabka digriiga ah ee cagaarka ama dhagaxyada.
Qaado ciidda beeritaanka. Waxaa laga iibsan karaa dukaanka, adigana waad karsi kartaa naftaada. Ku haboon tahay in la beero isku dhaf ah qaybo siman oo caws, qulqulo webi iyo dhul beerta.
Ku rid carrada qaar dusha sare ee lakabka qasacadaysan.
Si taxaddar leh uga soo saar Euphorbia weelka ka samee weelka dheriga loogu talagalay beeritaanka. Kadibna si tartiib ah u dabool carrada, wax yar ka dhig.
Markay koraan, marka xididdadu noqdaan dad badan oo dheriga ah, dhirta ayaa la beddelaa. Tani caadi ahaan waxay dhacdaa dhowr sano kasta. Dheriga loogu talagalay transplanting ayaa dooranaya cabbir ka weyn.
Euphorbia "Tirukalli" ayaa badanaa ku kordhiya adoo adeegsanaya. Warshad wali waxay si wakhti ah u baahan tahay manjooyin, iyo manjooyin waa weyn ee rooting ah. Hannaankani waxa si fiican loo qabtaa guga. Waxay isticmaalaan mindi fiiqan ama maqas, taas oo ah in horay loo nadiifiyo. Wixii beerto waxay dooran karaan dheriyo qoto dheer oo ballaaran leh derbi qaro weyn. Waa inay jirtaa godadka dheriga si loo soo saaro dareeraha xad-dhaafka ah. Dhar weyn oo dherer ah uma baahnid in la qaato, waa in ay ku haboon tahay xajmiga dhirta.
Geedi socodka faafinta by gooyn wuxuu ku dhacaa taxane soo socda:
Iska yaree dusha sare ee warshadda waalidka leh laamaha.
Geli guntooda biyo diirran si ay casiirku u soo baxaan.
Ka tag gooyn meel meel cidla ah ilaa 24 saacadood si aad u qallajiso jarista.
Waa lagama maarmaan in la gooyo cutubka leh phytohormone gaar ah ama budada kijinka ah ee firfircoon.
Qeybta hoose ee dheriga waa in lagu dhejiyaa lakabka dheecaan ee dhoobo ama dhagaxyada.
Peat qoyan ee taangiga beeritaanka, iyo ku shub nadiifi ciid webiga nadiif ah.
Gooyn lagu beeray waxaa lagu diyaariyey ciidda diyaarisay si ay ugu dhammeeyaan jarida qaybta peat. Laga soo bilaabo jiilaalka caanaha loo yaqaan 'canhed lugweed', hal dheri ayaa lagula talinayaa in lagu beero dhowr gooyn.
Ka dibna samee waraabin dhexdhexaad ah oo weelka u wareeji weel la beerto meel diirran oo ku filan, iyo sidoo kale meel fiican oo iftiinka qorraxda.
Si loo dedejiyo geedi socodka xididida, waxaad abuuri kartaa saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo. Si arrintan loo sameeyo, weelka ay la socoto daloolka waxaa lagu daboolay bac caag ah.
Maalin kasta waa in loo furaa hawada iyo qoyaanka. Carrabku waa in uusan qalajin, laakiin waa in aan loo oggolaan in uu qarxo.
Waa muhiim! Inta lagu jiro nidaamka gacmaha gacmaha, waa lagama maarmaan in laga ilaaliyo casiirka sunta ah ee ka sameysan gacmo gashi, ka dib markaad qabatid geedi socodka, gacmaha si fiican ugu dhaq saabuun iyo biyo.
Markaad sii kordhiso caanaha "Tirukalli", waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin. Sidaas daraadeed, qulqulka iyo qoyaanka dheeraadka ah, iyo sidoo kale hypothermia iyo xadgudubyada kale ee daryeelka ee ubaxkan dibadda ah waxay sababi kartaa muuqaal ah dhowr cudur oo.
Tixgeli kuwa ugu muhiimsan:
Kufsiga Root. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo ubaxa dheriga oo leh beddelka ciidda. In taangiga beeritaanka waa in ay noqdaan dheecaan. Marka transplanting waa in la fuliyaa ka saarista xididdada cayayaanka. Maraqyada waa in lagu daaweeyaa budada kijinka ah ee firfircoon.
Maqaalku wuxuu noqdaa midabka midabka leh ee midabka leh, wuxuuna noqdaa mid jilicsan.. Nidaamkani wuxuu sababaa hypothermia marka heerkulku hoos u dhaco dhibicda muhiimka ah. Nasiib darro, kiiskan, geedka lama kaydin karo.
Caleemaha waxay noqdaan huruud. Tani badanaa waxaa sabab u ah garaacis toos ah oo qorraxda ku dul dhirta. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay shino.
Hawada gudaha ee qallalan waxay waxtar u yeelaneysaa cayayaanka soo socda:
Mealybug. Waxaa lagu ogaaday qaabka vatoobraznogo cad oo hargab. Waxaa lagu saari karaa maro qoyan oo leh qamriga. Meelaha la waxyeeleeyay ee geedka waa in la jaraa.
Caarada caarada. Waxaad calaamadeyn kartaa cayayaanku marka ay muuqato muuqaalka webka thinnest iyo xargaha cad. Si loola dagaallamo, kordhiso qoyaanka qolka, nadiifi warshad biyo leh saabuun. Waa inay sidoo kale ku daboosho wakiilka kiimikada "Aktara".
Aphid. Waxaad ka saari kartaa cayayaanka farsamo ahaan ama biyo saabuun leh. Dhibaatooyinka daran, daawooyinka kiimikada ee Fufanon ama Actellic ayaa loo isticmaalaa.
Ma taqaanaa? 80kii qarnigii la soo dhaafay, farmashe Melvin Calvin ayaa soo jeediyay in saliidda laga heli karo caanaha Tirukalli. Shirkadda saliida ee Petrobras (Brazil) ayaa bilaabay baaritaan aan ku guulaysan.
Euphorbia "Tirukalli" oo aan wax qabad lahayn, si deg deg ah u kora, si fudud ayaa loo koray oo loo badiyaa, iyo haddii aad siiso daryeel haboon iyo xaalado raaxo leh ee koritaanka, kama cabsanayo dhibaatooyin kasta. Waxa ugu muhiimsani maaha in la koro carrada.